Gropy Fanaraha-maso - Shenzhen Joint Teknolojia Co., Ltd
Base mpamokatra asa rafitra no Integrated rafitra fitantanana izay mandroso eo amin'ny isan'andro fandidiana fomba fiasa, dia ahitana endri-javatra toy ny gropy tena ny sata sy ny akora, fanaraha-maso, hetsika fomba fitantanana, hetsika manokana fitantanana, isan'andro fikojakojana fitantanana, lehibe fanamboarana fitantanana, Accessories fitantanana, ary fototra vaovao fitantanana, sns
Status gropy Fanaraha-maso:
Real ny sata fototra sy ny fanairana asa fanaraha-maso, hanohana ny tena fanaraha-maso tontonana, manohana hatramin'ny 37 toeran'ny sy 18 fanairana fanaraha-maso
Fikojakojana sy fanamboarana Major fomba fitantanana
Fikarakarana sy ny Entry: Rehefa vita ny fikojakojana, ny vaovao azo niditra tao amin'ny alalan'ny finday sy mampakatra ny babo sary ny foibe, na azo niditra tao amin'ny olona voatondro ho PC rehefa hiverenana birao
drafitra ho an'ny volana manaraka
Plan ny Tatitry
Tatitry ny fitantanana
Plan ny Naniraka
Executive fikojakojana vatana baovao
Overhaul fanamboarana vondrona
Rehefa vita ny fitsaboana dia, ny orinasa fisoratana anarana
Hisoratra anarana ao amin'ny orinasa
Gropy dia nentina tany orinasa hisoratra anarana sy ny fanamboarana
Repair fomba fitantanana
Alarm fitantanana: Rehefa ny fanairana niteraka, ny fanairana dia ho avy hatrany nalefa tany preset finday avy amin'ny tale, injeniera, sy teknisianina, mba hampahafantarana azy ireo ny tena ratsy fototra vaovao, gropy toerana, mety ho diso, ary ilaina vaovao, raha ny mpiasa dia afaka mandray avy hatrany ary tsara asa.
Job Entry: Taorian'ny fanamboarana ny zozoro, ny namboatra koa ny aretina azo avy amin'ny finday fampiharana niditra tao, ka mampakatra amin'ny babo sary; na niditra tamin'ny manokana voatondro ao amin'ny solosaina, rehefa niverina tany birao.
Rush Repair Report: ny zozoro fanamboarana rehetra tantara tatitra azo avy amin'ny teny anglisy toy ny isan'andro, isan-kerinandro, na isam-bolana, ny tatitra azo niteraka ho an'ny mpanjifa.
Fa mihoatra noho ny nanamboarany fotoana, dia hisy toetra mena miseho.
Date fanadihadiana: Ny rafitra dia afaka handinika ny zozoro fanamboarana amin'ny isam-bolana, ahitana ny fotoana lany, Accessories nosoloina, toerana toerana, fanamboarana matetika, ary ny gropy taona an-fanompoana, sns